UWillie Mtolo uthi ezakhe seziyilungele iComrades ngeSonto | News24
UWillie Mtolo uthi ezakhe seziyilungele iComrades ngeSonto
PHOTO: SOURCED UBongumusa Mthembu owanqoba iComrades Marathon eyabe ilibhekise eThekwini ngo-2014 uthwelwe ngeqoma umqeqeshi wakhe, uWillie Mtolo othi uzokuphinda futhi lokho kulo nyaka njengoba kuzobe kugijinywa ngeSonto. (NE)
INKALAKATHA nengwazi endala kwezokugijima futhi ehlonishwa kakhulu ekuvundululeni amathalente angaziwa, uWillie Mtolo, waseMakhuzeni e-Underberg uthi ezakhe sezilinde usuku olungaliyo.
UMtolo, owazakhela udumo ngokuwina uxhaxha lwemijaho emikhulu kazwelonke kanye nokuba owokuqala waseMzansi ukuwina iNew York Marathon ngo-1992 ngo 2hrs:09min:29secs, uthi nje impela iyolala ibonene ngeSonto ekuseni kwiComrades Marathon.
Uthi ezakhe ziyeza futhi ziyothi uma zifika kubonakale ukuthi amadoda asethelekile futhi engasinisi amahleza.
Ekhuluma ne-Echo uMtolo uthe nangalo nyaka ubebambe ikhempu yabasubathi abayishumi nane (14) lapho bebezilolonga khona kusukela ngoJanuary. “Bonke abasubathi abaqeqeshwa yimina baqale ukuzilolonga ngoNovember ngonyaka odlule saze sazoqala ikhempu e-Underberg ngoJanuary. Hhayi, angikhali ngalutho. Ngingathi konke kuhambe kahle. Bonke abasubathi balungile,” kusho yena uMtolo. Ngaphandle kukaBongumusa Mthembu owadla umhlanganiso ngonyaka odlule, ezinye izihlabani ezaziwayo eMzansi kulo mdlalo oSiphiwe Ndlela (15th 2014), Sthembiso Dlamini (16th 2014), Luzuko Mdeliso no Bongani Mathenjwa, ukubalwa nje abambalwa.
UMtolo uthi uMthembu usesimweni esihle futhi angasivikela isicoco sakhe ngaphandle kwenkinga. Lo mqeqeshi ubuye athi unethemba lokuthi mhlawumbe abathathu noma abane abasekhempini njengamanje bazongena eqhulwini nasohlweni lwabokuqala eshumini.
“Mina angiyiboni inkinga kuMthembu ngoba konke kuhambe kahle futhi uzophinda ayiwine. Okufanele nje akwenze ukusebenza kanzima aze ayoqeda futhi ngimfisela inhlanhla kanye nabo bonke abakade besekhempini ngithi ndlelanhle nonke ningamaqhawe.” UMtolo uthi ukuze akwazi ukubamba le khempu usizwe uMondo Forest omvumelile ukuthi asebenzise izindlu zabo ukuze abasubathi bathole indawo yokufihla ikhanda, Ingwe Municipality enikele ngokudla kanye noMnyango wezeMidlalo nokuNgcebeleka osize ngokuxhasa ngeziphuzo ezidingekayo kubasubathi.
Kulo nyaka iComrades Marathon izoqala eThekwini ngo5:30 ekuseni ngeSonto ize izophelela eMphithi eCricket Oval ese-Alexander Park